Amandla Avuselelekayo - Ama-Green Renewables | Ukuvuselelwa Okuhlaza Okuhlaza (Ikhasi 2)
Kulesi sihloko sikutshela konke okudingeka ukwazi mayelana nesiteshi samandla olwandle kanye nezici zaso. Funda kabanzi lapha.
Sikutshela ngokuningiliziwe ukuthi i-Solar Fusion iqukethe ini nokuthi inaziphi izici. Funda kabanzi mayelana nalokhu kuguquguquka kwezobuchwepheshe.
Kulesi sihloko sichaza konke okudingeka ukwazi mayelana nabaqoqi belanga nezici zabo. Funda kabanzi lapha.
Kulesi sihloko sizokutshela konke odinga ukukwazi mayelana Chondrichthyes, izici zabo kanye nezinhlobo. Funda kabanzi lapha.
Kulesi sihloko sikutshela konke okudingeka ukwazi mayelana nokuhlolwa kukaMiller nezici zakhona. Funda kabanzi lapha.
Yini amandla elanga
Kulesi sihloko sizokutshela ngokujulile ukuthi yini amandla elanga nokuthi yiziphi izinzuzo zayo, ukusetshenziswa, izinhlobo nezici. Ungaphuthelwa!
Sichaza konke odinga ukukwazi mayelana liquid hydrogen nezici zayo. Funda kabanzi ngakho lapha.
Amandla avuselelekayo futhi angavuseleleki
Kulesi sihloko sikutshela konke odinga ukukwazi mayelana namandla avuselelekayo nalawo angavuseleleki. Funda kabanzi ngakho lapha.
Lapha ungathola lonke ulwazi oludingekayo mayelana ne-turbine yomoya nezici zayo. Funda kabanzi ngale mandla avuselelekayo.
Iyini imithombo yamandla
Kulesi sihloko sizokutshela ukuthi imiphi imithombo yamandla, ukuhlukaniswa kwayo nokusetshenziswa kwayo. Funda kabanzi ngemithombo yeSpain lapha.
Yini amandla kagesi kagesi
Kule ndatshana sikutshela ukuthi uyini amandla kagesi ophehlwa ugesi, ukuthi ukhiqizwa kanjani nokuthi yiziphi izingxenye zesitshalo se-hydroelectric.
Izinzuzo zamandla omoya
Kulesi sihloko sikutshela konke odinga ukukwazi mayelana nobuhle bamandla omoya nokusetshenziswa kwawo. Funda kabanzi ngakho lapha
Kulesi sihloko sikutshela konke odinga ukukwazi mayelana namandla ashukumisayo olwandle kanye nezici zawo. Funda ngakho lapha.
Heterotrophs: ziyini kanye nezici
Sikutshela konke odinga ukukwazi mayelana nezinto eziphilayo ze-heterotrophic nezici zazo. Funda kabanzi ngakho lapha.
Isebenza kanjani i-Geothermal Energy
Sikutshela ngokuningiliziwe ukuthi amandla we-geothermal asebenza kanjani nokuthi akhishwa kanjani. Funda kabanzi ngakho lapha.
I-turbine yomoya eqondile
Thola ukuthi umshini womoya ophendulwa nge-eksisi omile futhi ovundlile usebenza Yiziphi izinhlobo zomoya ophephela abakhona futhi bawakhiqiza kanjani amandla avela emoyeni?
Asebenza kanjani amaphaneli elanga
Sikutshela ukuthi ama-solar panel asebenza kanjani nokuthi iyiphi indlela yokukhiqiza ugesi. Yazi konke lokhu ngokujulile.
Izinzuzo zamandla elanga
Sikutshela konke odinga ukukwazi mayelana nobuhle nobubi bamandla elanga. Yazi konke lapha.
Amaphaneli welanga we-Photovoltaic
Sikutshela konke odinga ukukwazi ngamaphaneli elanga we-photovoltaic, izici zawo nokusebenza kwawo.
Sikutshela konke odinga ukukwazi mayelana namandla wamaza nezimpawu zawo. Funda kabanzi ngakho lapha
Sikutshela konke odinga ukukwazi mayelana nezinto ezisetshenziswayo. Funda kabanzi mayelana nezici zayo lapha.
Kulesi sihloko sizokutshela konke odinga ukukwazi mayelana nebhethri le-hydrogen, izinzuzo nezinkinga zalo.
Okufanele ukwenze uma kuphuka i-thermometer ye-mercury: ingabe inobuthi?
Sonke sisebenzise i-mercury thermometer ngesikhathi esithile ezimpilweni zethu ukukala ukushisa komzimba. Cishe…
Kulesi sihloko sikutshela konke odinga ukukwazi ngomhlaba ongajwayelekile kanye nezici zawo. Funda ngakho lapha.
Kulesi sihloko sizokutshela konke odinga ukukwazi mayelana nokubola kwezilwane nokubaluleka kwazo kuwebhu yokudla.
Kule ndatshana sihlaziya inkinga yemvelo ekhona enezikhwama zepulasitiki nokungcola kwazo. Funda ngakho lapha.
Sikutshela konke odinga ukukwazi ngezinhlobo ezahlukene zamalahle, umsuka wawo nokwakheka kwawo. Funda kabanzi ngakho lapha.
Sikutshela zonke izici zemvelo zamanzi angcolile, imvelaphi nokwelashwa kwawo. Funda kabanzi ngakho lapha.
Kulesi sihloko sizokutshela ngazo zonke izici, indawo yokuhlala, ukondla nokuzala kwe-alligator. Funda kabanzi ngale nhlanzi.
Kule ndatshana sikutshela ukuthi uchungechunge lweCosmos lumayelana nani nokuthi uyini umsuka wempumelelo yalo. Funda kabanzi ngakho lapha.
Isi-Llama (Lama glama)
Impela wake wezwa i-llama ikhuluma ngalokho okubonile kumavidiyo. Kuyisilwane esifuywayo ...
Sikukhombisa zonke izici, indawo yokuhlala, ukondla nokukhiqiza kabusha kwe-scolopendra. Funda kabanzi ngale arthropod lapha.
Kulesi sihloko sichaza konke odinga ukukwazi mayelana nokuthi yini i-niche yemvelo, ukuthi iyini nokuthi ibaluleke kangakanani.
Kulesi sihloko sizokukhombisa izici eziyinhloko zamaphahla elanga kaTesla kanye nobuhle bokufakwa kwawo.
Sichaza ngemininingwane nangezibonelo ukuthi kuyini ukuvolontiya kwezemvelo, ukuthi kususelwa kuphi nezinye izibonelo. Funda ngokuthi ungayinakekela kanjani imvelo.
Kule ndatshana sichaza ukuthi yini i-Kaplan turbine, ukuthi isebenza kanjani nokuthi yenzelwe ini. Funda kabanzi mayelana namandla kagesi.
Amasistimu elanga angenzi lutho
Kulesi sihloko sikukhombisa ukuthi ziyini amasistimu elanga angenzi lutho, izici zawo, okuhle nokubi. Funda konke ngakho lapha.
Izinsiza zemvelo ezingashi
Sikukhombisa ukuthi yimithombo engokwemvelo engapheli kanye nezinzuzo zayo ngaphezu kwamafutha ezimbiwa phansi. Funda ngakho lapha.
Kulokhu okuthunyelwe sikutshela ukuthi yini abaphazamisa i-endocrine nokuthi banamiphi imiphumela kwezempilo. Funda kabanzi mayelana nokungcola kwamakhemikhali lapha.
Uwafaka kanjani ama-solar panels
Kulokhu okuthunyelwe uzokwazi ukuthi ungasifaka kanjani isinyathelo sesinyathelo samapaneli welanga. Funda izinzuzo zokusebenzisa amandla elanga.
Kulokhu okuthunyelwe sizokutshela izici nokusetshenziswa kwe-turbine kaFrancis. Faka lapha ukuze ufunde kabanzi ngamandla we-hydroelectric.
Sichaza ukuthi yini indali evuselelekayo nokuthi ibamba iqhaza elingakanani ekukhiqizeni amandla aluhlaza eSpain. Faka lapha ukwazi kabanzi.
Kule ndatshana sichaza konke odinga ukukwazi ngemithetho ye-thermodynamics. Funda kabanzi nge-physics kulokhu okuthunyelwe.
Sikutshela konke odinga ukukwazi mayelana nokupompa ilanga kanye nezici zako. Faka ukuze ufunde kabanzi ngalolu hlelo olusha.
Kulesi sihloko sikukhombisa ukuthi yini ukufakwa kwe-photovoltaic nokuthi yiziphi izinzuzo zamandla okuzisebenzisela amandla.
Sikutshela konke odinga ukukwazi ngamathayili ophahla elanga. Faka lapha ukuze ufunde ngokusetshenziswa nobuhle balobu buchwepheshe be-photovoltaic.
Kule ndatshana sikukhombisa ukuthi iyini ingadi yelanga nokuthi isebenza kanjani. Ngaphezu kwalokho, uzokwazi ukwazi zonke izinzuzo ezinikezwa yilolu hlobo lwamandla.
Kule ndatshana sichaza konke mayelana namagugu emvelo. Faka lapha ukuthola ukuthi iyini nokuthi yiziphi izici zayo.
Imiphumela yemvula eneasidi
Kule ndatshana sikukhombisa ukuthi iyini imiphumela yemvula ene-asidi nokuthi yakhiwa kanjani. Ngaphezu kwalokho, uzokwazi ukwazi ukuthi iziphi izixazululo ezingaba khona.
Sichaza ngesimo samandla omoya eZaragoza. Faka lapha futhi wazi amandla okukhiqiza ugesi futhi uphile ngokuzisebenzisa.
Sichaza zonke izici nezinhlobo zemithombo yamandla emhlabeni. Funda konke ngakho lapha. Ngena manje!
Faka lapha ukuze ufunde ukuthi uyini umphumela we-photovoltaic nokuthi ukhiqizwa kanjani. Funda ukuthi ama-solar panel asebenza kanjani kusukela ekuqaleni.
Amabhethri elanga aphelele ekusebenziseni amandla elanga lapho angavunyelwe ukwenziwa yizimo. Funda konke ngabo lapha.
Izinhlobo zamandla avuselelekayo
Kunezinhlobo eziningi zamandla avuselelekayo. Kulokhu okuthunyelwe uzokwazi ukubazi bonke kanye nezinzuzo zabo eziyinhloko. Ulindeni?
Kwakhiwa isitshalo sokuphehla ugesi ngamanzi ukuze kukhiqizwe amandla ahlanzekile, avuselelekayo avela emanzini agciniwe. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi usebenza kanjani nezinhlobo?
Ishaja yelanga iyithuluzi eliguqula ngokuphelele elisebenza ngamandla avuselelekayo. Faka lapha ukuze wazi konke ngakho.
Amandla we-Hydraulic uhlobo lwamandla avuselelekayo asebenzisa izimpophoma ezisemadamu. Funda ukuthi kusebenza kanjani lapha.
Impompo yokushisa kwe-geothermal
Impompo yokushisa ye-geothermal kuyindlela enhle yokushisa ekhaya noma ukupholisa. Funda konke ngaye lapha.
Ukushisa kwe-geothermal kuhlanganisa amandla avela emhlabathini ukushisa ikhaya. Funda ukuthi kuyini nokuthi kusebenza kanjani kulokhu okuthunyelwe.
Lapha uzokwazi ukwazi i-panorama yamandla avuselelekayo eSpain kanye nokungeniswa nokuthunyelwa kwamanye amazwe okwenziwa izwe lethu. Ufuna ukwazi okwengeziwe?
Izici, ukusebenza kanye nezidingo zamalambu emigwaqo elanga
Funda ukuthi amalambu emigwaqo elanga asebenza kanjani, isakhi sokuguqula esivele sikhona emadolobheni. Ngabe ufuna ukwazi kabanzi ngayo?
Eposini ungafunda izinyathelo okufanele uzilandele kanye nezifundo ezenziwa ekwakhiweni kwepulazi lomoya.Ngabe unentshisekelo yokwazi?
Sethula imithombo ehlukile yamandla ahlukile angangcolisi futhi asiza ukuvikela imvelo. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi ziyini?
Imithombo yamandla evuselelekayo nokubaluleka kwayo ngekusasa
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngemithombo ehlukene yamandla avuselelekayo nokubaluleka kwawo ngekusasa lamandla. Ngabe ufuna ukwazi isihloko ngokujulile?
Konke odinga ukukwazi ngezitofu zepelethi
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngokusebenza kwezitofu ze-pellet, izingxenye nezinhlobo ezikhona. Ngabe ufuna ukwazi konke ngakho?
Iyini futhi isebenza kanjani amandla okushisa elanga
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngezici zamandla ashisayo, ukusetshenziswa nokuthi ukufakwa kusebenza kanjani. Ngabe ufuna ukufunda kabanzi?
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngokuthi uyini amandla elanga we-photovoltaic, ukuthi akhiqizwa kanjani nokuthi usebenzisa ini. Ngabe ufuna ukufunda konke mayelana nalesi sihloko?
Thola izici, ukusebenza nezinhlobo zemishini yomoya esetshenziswa kumandla omoya. Ngabe ufuna ukwazi kabanzi ngabo?
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngezici ze-inverter yamanje nokuthi ungayisebenzisa kanjani ekufakweni kwelanga. Ufuna ukwazi okwengeziwe?
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngezici eziyinhloko zekhithi elanga nezinzuzo ezinikezwa ukufakwa kwayo. Ngabe ufuna ukwazi kabanzi ngayo?
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngezici nokusetshenziswa kwamaphampu amanzi elanga. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi zisebenza kanjani nokuthi iyiphi engcono ngokuya ngesidingo sakho?
Konke odinga ukukwazi ngamandla ozisebenzisela wona
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngezinto ezibaluleke kakhulu okufanele uzicabangele uma sifuna ukuzisebenzisela amandla ekhaya. Ngabe ufuna ukwazi kabanzi ngayo?
I-European Union yephula irekhodi elisha lamandla omoya ngo-2017
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngerekhodi elifinyelelwe yi-European Union ngokufaka inani lamandla omoya amaningi. Ufuna ukwazi okwengeziwe?
Isitshalo samandla elanga esintantayo siseNetherlands, amandla elanga akhiqizwayo azoba ngaphezulu kwe-15% kunalawo atholakala ezitshalweni zelanga ezisemhlabeni futhi azobhekelela ama-75% wesidingo samandla sezwe.
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngokuthi siyini isitshalo samandla okushisa komhlaba nokuthi sisebenza kanjani. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi lolu hlobo lwamandla avuselelekayo lwenziwa kanjani nezinhlobo zalo?
Ukuvuselelwa kwe-EDP kuzohlinzeka ngamandla avuselelekayo kuNestlé e-US
UNestlé uzojoyina uhlu lwamazwe amaningi azinikele ekuvuseleleni ezitshalweni zawo e-United States. Yiziphi ezinye izinkampani ezizinikele ekuvuseleleni? Yimuphi umthombo ovuselelekayo abawusebenzisayo? Ziphi izitshalo zabo?
IGorona del Viento iyakwazi ukunikezela ngamahora we-1.974 ngama-renewable
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngerekhodi lokuthi isitshalo segesi kagesi iGorona del Viento esiqhingini sase-El Hierro sikutholile ngokuvuselelwa. Ufuna ukwazi okwengeziwe?
I-photovoltaic solar energy boom ibuyela eSpain
Ngemuva kweminyaka embalwa esabekayo yokuvuselelwa kabusha ngenxa yokusikwa yiPopy Party, kubonakala sengathi inzalo ibuyela ekutshaleni imali ezintweni ezivuselelekayo, ikakhulukazi i-photovoltaics. Siyini isizathu salokhu? Ayini amathemba ekusasa? Ngubani otshala imali?
Kuhle ukwandisa imigomo ye-Europe evuselelekayo ibe yi-35%
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngesidingo saseYurophu sokwengeza amatshegethi wamandla avuselelekayo abe ngu-35% ngo-2030.
Iminyaka engu-5 ngaphandle komoya omusha we-MW eCatalonia
NgoJanuwari 2013, ipulazi lomoya lokugcina eCatalonia lavulwa, kusukela lapho akukaze kuthunyelwe i-MW. Ngabe ikusasa libukeka kanjani? Ngabe kukhona amapaki ahleliwe?
Inguquko evuselelekayo yaseChile nomakhelwane bayo
IChile ibilokhu ibhekene nenguquko evuselelekayo iminyaka embalwa. Yimiphi imithombo evuselelekayo esetshenziswayo? Yiziphi izinhloso abanayo? Yimaphi amanye amazwe aseNingizimu Melika abheja kokuvuselelekayo?
Inselelo yamadolobha avuselelekayo
Kunamadolobha athile anezinhloso ezivelele ezivuselelekayo. Iningi labo lihlongoze ukuhlinzekela idolobha u-100%. Yiziphi lezi zinto? Ngabe bafuna ukuhlangabezana nini nenhloso evuselelekayo?
Amandla avuselelekayo enza i-17,3% yokusetshenziswa kwamandla kokugcina
Ngenxa yama-mega-auction amathathu enziwe ngo-3 nango-2016, iSpain ingafinyelela kuma-2017% womkhiqizo ovuselelekayo ngo-20. Yimiphi imiphakathi engabaholi? Yimaphi amazwe asevele eseqile kulawo-2020%?
ICosta Rica inikezwa izinsuku ezingama-300 kuphela ngamandla avuselelekayo
Sekuyiminyaka eminingana, iCosta Rica ibe yisibonelo sokuqhubeka nokuthola ngaphezulu kwengxenye yonyaka ngokulandelana ukunikezela kuphela amandla avuselelekayo, yephula irekhodi layo ngezinsuku ezingama-300.
Intuthuko enkulu ezofika ukukhuthaza amandla avuselelekayo
Intuthuko yezobuchwepheshe yenze ukuthi ilanga nomoya kube lula ukusebenzisa. Iziphi izinto esizosebenzisa zona? Sizokwenza kanjani ngcono ukusebenza kahle?
I-boom evuselelekayo e-Argentina
Ngenxa yohlelo lweRenovAr, ukuqaliswa kwamandla avuselelekayo e-Argentina kukhula njengogwebu. Ngabe unaziphi izinhloso zango-2025? Hlobo luni lwezitshalo ezifakiwe? Yini ebaluleke kakhulu?
I-China ithatha ubuholi baseYurophu emandleni avuselelekayo
I-China ithatha ubuholi be-Europe ezintweni ezivuselelekayo ngenxa yokutshalwa kwayo okunzima ngenkathi izimakethe zase-Europe zimile noma zehla.
IGalicia ifuna ukuhola ekukhiqizeni amandla avuselelekayo eSpain
Uhlelo lukaGalicia ukufinyelela ku-6 GW yamandla avuselelekayo afakiwe, okuzosetshenziswa kakhulu?
IPamplona izoxhasa ngezimali ukuzisebenzisela izindawo zokuhlala ezijwayelekile
UPamplona wethule uhlelo lwamandla, cishe i-euro eyisigidi izonikezelwa ukukhuthaza ukuzisebenzisela ukuzisebenzisa, ukuthuthukisa amandla nokonga amandla. Yini izinyathelo zakho futhi ngubani ozozuza?
IChile ihlela ukuqeda izitshalo zayo zamalahle
Uma inqubomgomo ingayonakalisi, iChile izosusa izitshalo zayo zamalahle phakathi namashumi eminyaka alandelayo, empeleni eminyakeni embalwa iphindwe kabili amandla ayo avuselelekayo.Yimuphi amandla obaluleke kakhulu? Ulibona kanjani ikusasa?
Amakhaya ase-Alcalá azohlomula ngamandla avuselelekayo
I-Alcalá de Henares inohlelo lwe- "Alcalá District Heating" oluzosiza amakhaya ayi-12.000 ngenxa yamandla avuselelekayo.
ISpain idinga ikomidi Lokushintsha Kwesimo Sezulu ukuthi lihole lolu shintsho
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngesidingo sokuthi iSpain ibe nekomidi Lokushintsha Kwesimo Sezulu ukuhola ukuguqulwa kwamandla.
Ngabe amandla avuselelekayo asevele enenzuzo?
Izimakethe zamandla kagesi emhlabeni bezilokhu ziguquka ngokuqhubekayo isikhathi esithile, kodwa kulokhu zifinyelele eqophelweni elinzima ukunqoba. Ngabe amandla avuselelekayo ngaphandle koxhaso asevele enenzuzo futhi ashibhile kuphi?
Amandla omoya ayewumthombo owanikela kakhulu eSpain ngoJanuwari
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngenani lamandla omoya akhiqizwa eSpain ngenyanga kaJanuwari. Ufuna ukwazi okwengeziwe?
Yimaphi amazwe aseYurophu abaholi ekukhiqizeni okuvuselelekayo?
Yimaphi amazwe asevele ahlangabezana nezinjongo zaseYurophu?
Amandla avuselelekayo ahlanganisa ukufunwa okungu-17,3% ngo-2016
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngenani lamandla avuselelekayo iSpain ne-EU abalihlanganisa ngokufunwa okuphelele ngo-2016. Uyafuna ukwazi izibalo?
Izinkampani zaseSpain zifuna ukubheja ngokuvuselelwa
Njengamanje eSpain, ngokungafani namanye amazwe aseYurophu njengePortugal, sifinyelela ku-17% kuphela womkhiqizo ovuselelekayo. Ukushintsha lokho, umbuso usukhiqize izindali ezi-3 ngonyaka owedlule, futhi izinkampani ziphendula kahle futhi zifuna ukungena esitimeleni esivuselelekayo.
IFrance yethula uhlelo lokuphinda kabili amandla omoya ngo-2023
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngohlelo olwethulwe yiFrance lokuphinda kabili amandla omoya afakiwe ngo-2023. Ngabe uyafuna ukwazi ukuthi bazowenza kanjani?
Ukuguqulwa kwamandla kufanele kusheshiswe ukugwema ukuguquka kwesimo sezulu
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngengxoxo e-Davos Economic Forum ngesidingo sokusheshisa ukuguqulwa kwamandla ukulwa nokuguquka kwesimo sezulu.
Izindleko zokukhiqizwa kukagesi ngezibalo
Ngenxa yejika lokufunda, izindleko zamandla avuselelekayo zehle kakhulu futhi ngaphezu kwalokho kuzokwehla. I-IRENA iqinisekisa ukuthi konke okuvuselelekayo kuzoba nokuncintisana eminyakeni embalwa.
I-European Union izosusa intela ekusebenziseni okuzisebenzelayo
I-European Union izovumela ukuzisebenzisela ukuzithengisa nokuthengisa umkhiqizo wayo ongaphezu kwamandla ngaphandle kwezintela ezihlukumezayo, okuphikisana nentela edumile yelanga ekhishwe iqembu elidumile ezweni lethu.
Ukwehliswa kwezindleko okumangalisayo kwamandla elanga
Eminyakeni yamuva nje, izindleko zamandla elanga zehliswe ngendlela engakholeki. Zinciphiswe nini uma kuqhathaniswa namanye amandla? Ziyini izindleko zangempela? Kukumaphi amazwe obheja kuwo ngokuvuselelwa?
Kuphela yi-7,7% yamandla asetshenzisiwe eCanary Islands avela kokuvuseleleka
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngamandla amancane asetshenziswa emthonjeni ovuselelekayo eCanary Islands. Ufuna ukwazi okwengeziwe?
Izitshalo ezinhle kakhulu zikagesi emhlabeni
I-Hydropower ingumthombo wokuqala ovuselelekayo emhlabeni. Yiziphi izitshalo ezibaluleke kakhulu zokuphehla ugesi? Zitholakala kuphi?
Isibikezelo samandla omoya ngo-2030 ngokusho kwe-PREPA
I-PREPA yenze izibikezelo zomphakathi ngekusasa lamandla omoya. Ziyini izinhloso zayo? Yiziphi izibikezelo ezinethemba elikhulu kakhulu? Mangakanani amandla azofakwa? Yini efunwa yi-PREPA? Ngabe uhlaka lokulawula luzolungiswa?
Amandla avuselelekayo azonciphisa izindleko zawo cishe isigamu ngo-2020
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngokunciphisa izindleko zokukhiqiza amandla avuselelekayo abhekana nazo. Kuzoba nini ukuphakama kwala mandla?
I-APPA ifuna umgomo ongu-35% wokuvuselelwa okuvunyelwe yi-PE
Ukulungiswa kabusha kwe-APPA kwamukela ukwesekwa okubanzi kwePhalamende ngenhloso engu-35% yamandla avuselelekayo. Ngaphezu kwalokho, iSpain inamandla angaphezu kwawanele nezinsizakusebenza.
Amachibi amakhulu eSpain
Amachibi amakhulu kunawo onke eSpain. Yiziphi izici zobuchwepheshe ezinazo? Zitholakala kuphi? Ngubani ozisebenzisayo? Anamakhono anjani? Yini ikusasa elilindele?
Amandla omoya ngo-2017 nezibikezelo zango-2018
Amandla omoya njengamanje anikela ngama-20% echibi eliphelele laseSpain. Lesi sibalo siguquke kanjani eminyakeni yamuva? Sizoguquka kanjani ngokuzayo? Sizohamba ngamaphi amanani?
Benza amandla avuselelekayo ngeyunithi yeselula ebizwa nge-Aurora
I-Aurora, iyunithi elingumahambanendlwana lokukhiqizwa kwamandla avuselelekayo izokwazi ukuhanjiswa noma ikuphi ukuze ithumele "i-arsenal" yayo yamapaneli elanga nomoya ophephela futhi ikhiqize amandla ahlanzekile ngezikhathi zenhlekelele yobuntu.
UGran Canaria uzibophezele ekwandiseni ukusebenza kahle kwamandla nokuvuselelwa kwamandla
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngephrojekthi esesigabeni sesibili eLas Palmas de Gran Canaria ngokusebenza kahle kwamandla namandla avuselelekayo. Ngabe ufuna ukwazi ngakho?
Amandla omoya waseJapan adlula ezinkampanini ezimbili zaseSpain
Izinkampani ezimbili zaseSpain zisayina isivumelwano sokwakha i-SPA nokwenza amaphrojekthi wamandla omoya antanta olwandle ngeSATH technology eJapan.
Ihora elilodwa kwamahora amathathu e-kilowatt eSpain lenziwa ngokuvuselelwa
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngombono wamandla eSpain nokwanda kwamandla avuselelekayo. Ngabe ufuna ukubona ukuthi amandla asebenza kanjani?
I-Ecocat, i-catamaran yokuqala yaseSpain esebenza ngamandla elanga
Lokhu okuthunyelwe kukhuluma ngezici eziyinhloko ze-Ecocat, i-catamaran yokuqala yaseSpain yokusebenza ngamandla elanga. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi isebenza kanjani?
ICastilla-La Mancha inika amandla amandla avuselelekayo
ICastilla-La Mancha izothuthukisa imixhaso yamandla avuselelekayo nokonga amandla kagesi. Amandla avuselelekayo akhethiwe azoba ngamandla e-geothermal, umoya kanye ne-photovoltaic energy ukuze akwazi ukuba semakhaya, emiphakathini nasezinkampanini.
I-Biomass njengomthombo wamandla waseSpain
ISpain ngokukhula kwayo njalo ku-biomass kungazimela cishe izinsuku ezingama-28 ngalokhu kuphela kwamandla avuselelekayo. Kodwa-ke, sikude kakhulu ukufinyelela ezikhundleni eziphezulu, izinsuku eziyi-132 zokuzisebenzisela amandla.
Ipulazi lomoya lika-Iberdrola elingasogwini eWikinger selivele lixhunywe kugridi
U-Iberdrola usungule ipulazi lomoya iWikinger. Likuphi? Linamandla kangakanani? Lakhiwa kanjani? Yimaphi amanye amaphrojekthi u-Iberdrola anawo ngamandla omoya asogwini?
Ukusetshenziswa kwamalahle negesi kukhule ngenxa yemvula ephansi kanye nokuntuleka kokufakwa kwamandla amasha avuselelekayo Ayini amaphesenti okusetshenziswa kwamalahle? Liyini iphesenti lokusetshenziswa okuvuselelekayo? Ingabe lizokwanda ngokuzayo? Yiziphi izinsiza kusebenza ezikhona ezweni?
IBurlington yidolobha lokuqala e-United States ukuthi linikwe amandla aphelele ngamandla avuselelekayo ngokuxuba amandla okumangazayo.
Izinkampani zaseJalimane zikhokha ukusebenzisa ugesi
IGermany iyakwazi ukwenza izephulelo kumabhilidi kagesi wezakhamizi zayo ngosizo lwamandla avuselelekayo.
I-ITC iphenya izinto ezintsha zokuthuthukisa imishini yomoya
I-ITC ibamba iqhaza kuphrojekthi ye-AeroExtreme yokwenza ama-wind turbines angamelana kakhudlwana. Lude kangakanani lolu hlelo? Yakhiwa kanjani i-turbine yomoya? Yiziphi izinkinga abanazo? Yikuphi ukushiyeka kwabo?
ICabildo de La palma izokwabela u- € 200000 ukusiza ukuzisebenzisa
ILa Palma izogqugquzela ukuzisebenzisela ukuzisebenzisa phakathi kwezakhamizi zayo. Siyini isiphakamiso sakho? Ingabe yiCabildo kuphela esekela amandla avuselelekayo? Ngabe uhulumeni ozimele ucabangani ngamandla ahlanzekile?
Ipaki le-Iberdrola (Avangrid) le-Apple lizosebenzisa imishini yenjini iVestas
U-Iberdrola, esebenzisa inkampani yakhe engaphansi kwe-Avangrid, uzokwakha ipulazi lomoya elizonikezela amandla ku-Apple. Yimaphi ama-turbine abazowasebenzisa? Yimaphi amandla abazoba nawo? Isikhathi eside senkontileka? Yiziphi ezinye izinkampani ezisayina lolu hlobo lwenkontileka?
Ukusikwa kokuvuselelwa kungabiza kakhulu eSpain
Ukusikwa kumholo ovuselelekayo kungabiza kakhulu uMbuso waseSpain. Mingaki imiklomelo esalindile? Ingakanani isamba? Ingabe iSpain isivele igwetshwe ukukhokha?
I-Argentina ifuna ukwandisa ukukhiqizwa kwayo okuvuselelekayo
I-Argentina ibheja ngezinto ezivuselelekayo ngendlela ebalulekile.Yiziphi izinyathelo ezithathayo? Izosebenzisa maphi amandla avuselelekayo? Yini uMongameli Macri ayicabangayo ngalokhu?
Amandla omoya ngo-2030 azonikezela ngaphezu kuka-30% kagesi
ISpain izokhipha isidingo sikagesi ngama-30% ngaphezulu ngamandla omoya, izuze amamegawathi angama-40.000 kagesi ofakiwe.
I-turbine yomoya yokuhlala ngentengo ye-Smartphone
ENdiya abazalwane ababili benze umshini ophephela umoya ophilayo ngemali ephansi kakhulu ngentengo ye-Smartphone ukuqeda ubuphofu bamandla.
Ukuzibophezela okuhle kwemiphakathi eminingi ngokuvuselelwa
Ngemuva kweminyaka embalwa ye-paron, imiphakathi eminingi ezimele iyaphinda ibheja ezintweni ezivuselelekayo. Yimiphi imiphakathi enamandla afakiwe kakhulu? Kukuphi ukubheja okukhulu? Ilanga noma umoya?
I-Aragon ikhuthaza ukuvuselelwa kabusha ngamapulazi amasha omoya nezitshalo zelanga
Amapulazi amaningi omoya noma ukufakwa kwe-photovoltaic ngezinga elincane kwakhiwa e-Aragon. Iyiphi inkampani ebaluleke kunazo zonke yase-Aragon emkhakheni? Lo mkhakha uwukhuthaza kanjani lo mphakathi ozimele?
Ibhethri elikhulu lihlanganisa ukucisha kweNingizimu Australia
AbakwaTesla bafaka ibhethri esifundazweni saseNingizimu Australia ukugwema ukucwilisa kaningi kwinethiwekhi kagesi, leli bhethri libe ngelikhulu kunawo wonke emhlabeni kuze kube manje futhi ngenxa yokubheja ku-twitter.
U-Enel uzokhiqiza amandla ashibhe kunawo wonke emhlabeni eMexico
U-Enel uzokhiqiza amandla ashibhile emhlabeni, ikakhulukazi ezitshalweni eMexico. Izosebenzisa hlobo luni lwamandla avuselelekayo? Izobiza malini? Izoqala nini?
I-China ne-United States bangabaholi abaphelele emandleni afakiwe omoya, yize amanye amazwe amaningi ekhula ngokushesha.
I-Albacete iku-1 ephezulu yokukhiqiza ugesi ngenxa yokuvuselelwa. Uyini amandla obaluleke kakhulu? Iyiphi ipaki enkulu kunazo zonke eSpain futhi ikuphi? Iyiphi inkampani eyakhayo?
IBrussels yehlisa inani lokukhiqiza elivuselelekayo liye kuma-27%
UMkhandlu we-EU waqinisekisa ezinsukwini ezimbalwa ezedlule inhloso yawo yokuthola okungenani u-27% wamandla avuselelekayo ekusetshenzisweni kokugcina ngonyaka ka-2030, uma kuqhathaniswa nama-35% avikelwe yiPhalamende laseYurophu kanye neKhomishini uqobo. Lolu shintsho?
Imihlambi yamaCanarian izinikele emandleni avuselelekayo
Kulokhu okuthunyelwe ungabona ukuthi amandla avuselelekayo angene kanjani emkhakheni wemfuyo eCanary Islands futhi avumela ukonga. Ngabe ufuna ukubona ukuthi kanjani?
Umthombo wamandla omoya umoya, kepha singawusebenzisa kanjani? Ukwenza lokhu, i-windmill noma i-aerogenerator isetshenziswa.
Iphrojekthi Yamadolobha Azigcinayo izalwa e-Amazon
Lokhu okuthunyelwe kuchaza imihlahlandlela ezolandelwa yi-Self-Sustainable Cities kuphrojekthi ye-Amazon (CASA). Ngabe ufuna ukwazi ukuthi imayelana nani?
Izwe lethu linesiko elikhulu lamandla kagesi ophehlwa ngamanzi, lakhiwe eminyakeni eyikhulu eyedlule. Zikuphi izikhungo zokuphehla ugesi?
ISpain kumele ihlangabezane nezinhloso zesimo sezulu ngokuguqulwa kwamandla
ISpain idinga ukuguqulwa kwamandla ngokuya ngamandla avuselelekayo ukuze ihlangabezane nezinhloso zesivumelwano saseParis. Uzokwenza kanjani?
IBrussels isekela iPoland ngamandla avuselelekayo
I-EC ivume uhlelo olucishe lube ngama- € 10000 billion ukukhuthaza ukuvuselelwa ePoland, leli kube yizwe elingcolisa kakhulu kwiNyunyana
Ngabe ingcebo eyenziwe ngokuvuselelwa ibalulekile ngaphakathi kwe-GDP eSpain?
Amandla aluhlaza akhuphule umnikelo wabo kwi-GDP kazwelonke futhi ehlisa kakhulu amanani emakethe kagesi. Kukhule kangakanani?
Imizi yesikhathi esizayo, imizi ehlakaniphile
Bonke osopolitiki bafuna ukuthi idolobha labo libe idolobha elihlakaniphile, kepha liqukethe ini? Ziyini izinzuzo zalo? Yikuphi ukuthuthuka abanakho?
Ukubaluleka kokwenza ngcono amandla kagesi nokusebenzisa amandla avuselelekayo
I-EU igunyaze imigomo emisha yokuqinisa ukonga amandla kagesi kanye nokuvuseleleka ngaphakathi kwenyunyana. Yiziphi lezo zinto?
Cishe abantu abayizigidigidi ezi-XNUMX emhlabeni jikelele abanawo ugesi
Emhlabeni jikelele, kunabantu abacishe babe isigidi sezigidi abaphila ngaphandle kukagesi. Kwenzekani kubantu abasala bengenawo ugesi?
I-bioenergy esetshenziselwa ezokuthutha izokwandiswa amahlandla ama-4 ngo-2060
Inani le-bioenergy elisetshenziselwa ezokuthutha lifuna ukukhuphuka ukulwa nokuguquka kwesimo sezulu. Uzokwenza kanjani?
Ikusasa elizayo, amandla avuselelekayo no-oyili omncane
Kuyo yonke imibiko yezinhlangano zomhlaba jikelele ukukhula okunganqandeki kwamandla avuselelekayo kukhonjisiwe, ithini le mibiko?
Ukungcola eMadrid nemikhawulo yethrafikhi
Ngeshwa, imikhawulo yethrafikhi eMadrid ngenxa yokungcola iya ngokuya ivama kakhulu.Yini futhi ingabe iyasebenza?
Abadlali abasha emhlabeni wamandla avuselelekayo
Ngenxa yezindali zikahulumeni ezi-3, izinkampani eziningi zibonakale zizimisele ukutshala izimali ezivuselelekayo.Yini leyo? Yiluphi utshalomali abazolwenza? Nini?
Kunabantu abasasho ukuthi amandla elanga ayabiza
Eminyakeni yakamuva, izimakethe zamandla emhlabeni wonke bezilokhu zishintsha kakhulu futhi siya ngokuya sibheja ezintweni ezivuselelekayo
AbakwaNokia Gamesa bakha imishini yabo yomoya yokuqala
I-Siemens ne-Gamesa basebenzisana ndawonye ukuthuthukisa ama-turbine amabili omoya, amabili amakhulu kunawo wonke ake adalwa izinkampani.
ISpain iphakamisa imigomo yamandla avuselelekayo ibe ngama-35%
Izinhloso zokuba namandla avuselelekayo zikhuphukile zisuka kuma-27% zaya kuma-35% ngonyaka ka-2030. Ngabe lezi zinhloso zifuna ukuvelela noma azanele?
I-AREH, i-megaproject yokuhlanganisa amandla elanga nomoya
Amandla elanga nawomoya asebenza ndawonye ukuzala iphrojekthi ye-AREH ngokufakwa kwamandla kagesi angama-megawatts ayizi-6.000.
ISpain ibinganikezwa amandla we-biomass kuphela kuze kube sekupheleni konyaka
ISpain inamandla amakhulu okukhiqiza amandla avuselelekayo avela ku-biomass. Ngabe ufuna ukwazi kabanzi ngayo?
Amapulazi amakhulu omoya emhlabeni
Njengamanje akuphi amapulazi omoya amakhulu kunawo wonke emhlabeni? Ngabe amapaki omhlaba noma amapaki aselwandle. Liyini ikusasa lamandla omoya?
UTesla uqeda ukwakhiwa kwebhethri elikhulu kunawo wonke emhlabeni
U-Elon Musk ubheje nohulumeni wase-Australia ukuthi ibhethri lizokwakhiwa kungakapheli izinsuku eziyi-100 kusayinwe inkontileka. Uma kungenjalo, kuzoba mahhala.
Ukuqashwa emkhakheni ovuselelekayo eSpain
Ngeshwa umkhakha ovuselelekayo uyaqhubeka nokucekela phansi imisebenzi eSpain, kuhamba kanjani emhlabeni wonke? Futhi abesifazane banamuphi umthelela?
Iphrojekthi yeHondar nemiphumela yezinto ezisetshenziswayo ezimpilweni zethu
Ngeshwa izinto ezifana nepulasitiki noma izinsimbi zonakalisa izilwandle zethu. Iphrojekthi efana neHondar 2050 izama ukufundisa abantu ukuthi bayigweme
IColombia izinikele ngokuqinile ekuvuseleleni kabusha
IColombia ibheja kakhulu ezintweni ezivuselelekayo.Yikuphi okusetshenziswe kakhulu? Kukhona namanye amazwe eNingizimu Melika anotshalomali olukhulu. Yikuphi?
Iziqhingi zaseBalearic zizokhulisa amandla azo avuselelekayo ngama-25% ngamapaki ama-7 amasha elanga
Iziqhingi zaseBalearic zizokhuphula amandla azo avuselelekayo ngama-25%, ngenxa yamapaki amasha elanga ayi-7.Ngabe lesi yisenzo sakho kuphela? Ngabe kuzoba nokuningi?
Ukuqedwa kwamahlathi e-Amazon kuncishiswe ngama-28% uma kuqhathaniswa nango-2016
Kulezi zinsuku kubanjelwe iBonn Climate Summit (COP23) kanti sekube nenkulumo mayelana nokugawulwa kwamahlathi e-Amazon. Unjani umbono?
IBrussels ivuma usizo lwamandla avuselelekayo
I-European Commission (EC) inikeze imvume yayo embusweni waseSpain lapho kukhona khona usizo lomphakathi lokufaka amandla avuselelekayo.
Izindlu zokugcina izithombo zelanga zikwazi ukukhiqiza amandla nokutshala
Izindlu zokugcina izithombo zelanga ziwuhlobo lobuchwepheshe obuhlakaniphile obukwazi ukukhiqiza amandla elanga nezitshalo ezikhulayo ngasikhathi sinye. Ngabe ufuna ukwazi ngabo?
Amandla avuselelekayo eNingizimu Melika
Eminyakeni yamuva eLatin America kuguqulwe izinguquko ezimbalwa zamandla ukuze kuvezwe ukukhula okunamandla kwamandla avuselelekayo.
ICepsa izothuthukisa ipulazi layo lokuqala lomoya e-Andalusia
ICepsa isimemezele esitatimendeni ukuthi ithole amalungelo okwakha ipulazi lomoya lokuqala eJerez de la Frontera
Intuthuko Entsha Emandleni Omoya
Siyazi ukuthi amandla omoya angamandla amakhulu avuselelekayo emhlabeni, liyini ikusasa lawo?
Amalayisense amasha angama-38 amapulazi omoya e-Almería
Ngemuva kweminyaka embalwa udaba lumisiwe, iJunta de Andalucía inamaphrojekthi epulazi lomoya angama-38 aqhubekayo. Yiziphi izinqubo futhi zikuphi?
Ipulazi lomoya lokuqala elintantayo selivele liyaqhubeka eNorth Sea
Leli pulazi lomoya elintantayo elinamandla elingu-300 MW, elizokwenza likwazi ukuphakela amandla emakhaya angama-20.000 XNUMX
UTesla ubuyisela ugesi esibhedlela sezingane ePuerto Rico
UTesla usiza iPuerto Rico ukuba ibuyele esimweni esejwayelekile ngemuva kokuhlaselwa yiziphepho ezimbili ngoSepthemba. Afakwa kuphi amaphaneli elanga?
Amaphiko amvemvane amnyama akhulisa ukusebenza kahle kwamaseli elanga
Ucwaningo olwenziwe luthole ukuthi izimpiko zezimvemvane ezimnyama zingakhuphula ukumunceka kwamaseli elanga kufika ku-200%.
I-Australia isusa amaphrimiyamu avuselelekayo ukunciphisa umthethosivivinywa kagesi
Amaphrimiyamu wokuvuselelwa azokhishwa e-Australia, konke ukunciphisa intengo kagesi. Ngubani osekela lesi silinganiso?
Ukuthengisa okumangazayo kwemoto kagesi ngoSepthemba odlule
Ukuthengiswa okumangazayo kwezimoto zikagesi eSpain nyakenye ngoSepthemba, kungani kunjalo, yini amathemba alo mkhakha?
ISoria, ipharadesi le-biomass
Kusukela ngo-2015, kwa-Soria ama-boilers kagesi noma edizili athathelwa indawo amanye ama-biomass okunikezwa kwamanzi ashisayo nokushisa
Amazwe amane avuselelekayo angama-100%
Zisebenzisa imithombo yazo yemvelo, amanye amazwe enze iphupho lokuba nomthombo wamandla avuselelekayo ayi-2017% lifezeke ngo-100.
Abenza kabusha bacela ukujezisa labo abangcolisa
Njengesisekelo soMthetho Wokuguquguquka Kwesimo Sezulu Namandla Okuguqula Amandla, izinhlangano eziningana zifuna intela eqinile yobuchwepheshe bokungcolisa.
Umhlaba ubheke e-Argentina ngentuthuko evuselelekayo
Kulezi zinsuku ingqungquthela ye-Airec 2017 ibanjelwe e-Argentina, izwe elinamathuba amaningi kulo mkhakha.Ikusasa lalo lizoba njani?
Yini esingayilindela emandleni omoya
Njengamanje, kuphela u-4% wesizukulwane samandla emhlabeni amandla omoya. Ayini amathemba? Yini imishini yomoya emisha enganikela ngayo?
I-Photovoltaic solar energy, umholi phakathi kwezinto ezivuselelekayo
Amandla elanga ayengumholi phakathi kwezinto ezivuselelekayo ngonyaka owedlule, ngabe lokho kwakudalwa intengo ephansi kuphela? Liyini ikusasa lalo namathemba alo?
I-China ihola phambili ngokuthuthuka kwamandla avuselelekayo emhlabeni
Amandla elanga we-Photovoltaic yiwo akhule kakhulu kuso sonke lesi sikhathi futhi iChina iyona ehola phambili kwamandla avuselelekayo.
Inselelo yamandla avuselelekayo
Amandla avuselelekayo awakwazi ukugcinwa noma ukuhanjiswa ezindaweni ezikude nokukhiqizwa kwazo. Ngabe umhlaba uhlose ukwenzani ngale nselelo?
8000 billion otshalomali olusha emhlabeni ovuselelekayo
I-8GW yamandla aklonyelisiwe izodinga ukutshalwa kwemali okungama- € 8000. billion.Ziphi izinkampani ezihlomulile?
Umphumela ongaba khona we-avalanche wezikhalazo mayelana nokusikeka kokuvuselelwa kabusha
Sekuvele kukhona ukulamula okungaphezu kwama-30 okubhekiswe eSpain ezinhlanganweni ezahlukahlukene, kepha abatshalizimali bangaphandle kuphela abaya kubo, uzoba yini umphumela?
Ukuguqulwa kwamandla amasha ngeBig Data
Idatha enkulu yigama elisemfashinini kakhulu namuhla, kusho ukuqoqwa okukhulu kwemininingwane ukuthola iphethini. Ngabe kuzoba wusizo kokuvuselelwa kabusha?
Amandla we-geothermal amandla avuselelekayo atholakala ngokusebenzisa ukushisa okuvela ngaphakathi komhlaba.yini okuhle nokubi kwakho?
Ngaphambi kuka-2020 Citibank ifuna kuphela ukusebenzisa amandla avuselelekayo
AbakwaCitibank bahlela ukusebenzisa amandla avuselelekayo kuphela ngo-2020. Kukhona nezinye izinkampani ezigxila ezintanjeni, uyazi ukuthi ziyini? Abenzi bokuvuselelwa basemfashinini
ISpain ibhekene nokuphela kwesikhathi sokusebenziseka kwamapulazi omoya
ESpain, cishe isigamu sama-23.000 MW asefakiwe ezweni manje azodlula iminyaka engama-2025 akhona ngo-20. Ngabe bazokwelula isikhathi sokusebenziseka?
I-cyclalg ithola i-12 kg yokuqala ye-biomass evela ku-microalgae
Ngaphezulu kwe-10 kg ye-biomass etholakale nge-microalgae elinyiwe ezokwenza inqubekela phambili ku-biomass kanye nokusimama.
Ngabe kungasetshenziswa ukukhuhla ukukhiqiza amandla we-biomass?
Kucatshangelwa kabusha ithuba lokusebenzisa isikhuhla ukukhiqiza amandla. Ngabe lezi zihlahla zingasetshenziswa njengomthombo wama-boiler we-biomass?
IPowerwall 2, isizukulwane sesibili samabhethri eTesla
I-Tesla Powerwall 2 yisizukulwane sesibili sebhethri elaziwa kakhulu leTesla Powerwall, izotholakala nini eSpain? Futhi ngamalini?
INkantolo Ephakeme iyavumelana noHulumeni ecaleni lokuvuselelwa
INkantolo Ephakeme iyaqhubeka nokubambezela abatshalizimali abathi bafuna ukusikwa kokuvuselelwa, ngakolunye uhlangothi, i-ICSID ivumelane nabo.
Kuningi okutshalwa ekusebenzeni kahle kwamandla kunezibaseli ezimbiwa phansi
Ucwaningo olwethulwe eMadrid lukhombisa ukuthi ukutshalwa kwezimali emhlabeni wonke kwehle ngo-12% ngo-2016 futhi ukutshalwa kwemali ekusebenzeni kwamandla kunyukile.
Iplanethi idinga amandla avuselelekayo
Kufakwe isicelo sokuxwayisa ukuthi inqubo yokuguqulwa kwamandla kufanele isheshiswe, ngoba iplanethi ifuna ukuthi sithathe isinyathelo ngokushesha.
Amandla wamagatsha aseBankia azovuselelwa ngo-100%
INexus Energía izonikezela ngo-100% wamandla eBankia, futhi konke lokhu kuzoba ngomsuka ovuselelekayo. Ezinye izinkampani seziqala ukulandela indlela efanayo.
Intela yehlazo, ukuziqhenya kweSpain
Intela yehlazo, yithi kuphela izwe lapho kukhona intela elangeni. Uqukethe ini? Siyakutshela ukuthi ikuthinta kanjani, izoba namanani maphi?
ICiti, ibhange elifisa ukusebenza ngamandla ayi-100% avuselelekayo
ICitiBank yibhange elizibophezele ekwehliseni umthelela walo kwezemvelo futhi ngalokhu lihlose ukumboza izidingo zalo ngamandla avuselelekayo.
3 ubuchwepheshe obuguqukayo obususelwa kumandla avuselelekayo
Namuhla sizobona izinhlobo ezintathu zobuchwepheshe bezinguquko ezizosisiza ukuthi sikwazi ukusimama kangcono nemvelo futhi sisebenzise izinsiza.
Ngemuva kweminyaka emithathu, amandla avuselelekayo ayakhula futhi
Ezindalini zamandla avuselelekayo ezibanjwe muva nje. Ngaphezulu kwama-8 GW aklonyelisiwe, okuzokwenza ukuthi umkhakha uvuseleleke esikhathini esifushane.
Esikhathini esizayo esiseduze, kuzoba ngamandla avuselelekayo neminye imithombo yamandla ezobusa umhlaba. Yibuphi ubuchwepheshe obuzosisiza ngamandla?
Omunye wamandla avuselelekayo wokusebenzisa ulwandle ngamandla e-wave, awaziwa nangokuthi yi-wave energy.
Funda ukuthi isebenza kanjani kanye nezici zobuchwepheshe zamandla olwandle nezitshalo zayo zamandla. Isimangaliso sobuchwepheshe
Ukuvela kwe-biomass eSpain eminyakeni eyishumi edlule? Sikuphi futhi siyaphi? Ayini amathemba akho nekusasa lakho?
Imishini yokuphehla ugesi emisha engenabala
Ukugwema imithelela yamabhande nokugwema ukudala imfucuza, amaphrojekthi wezinjini zomoya ngaphandle kwamakhaba ayenziwa.
Amacembe ophephela womoya uhlobo olusha lwemfucuza evelayo
Cishe ama-4.500 blade asetshenziswa ngama-wind turbines ukukhiqiza amandla omoya ngeke esafaneleka futhi kuzofanele alashwe eminyakeni eyi-8 ezayo.
Isitshalo esikhulu kunazo zonke esishisayo ngelanga emhlabeni sizokwakhiwa e-Australia
Isitshalo esikhulu kunazo zonke esisebenza ngelanga emhlabeni sizotholakala e-Australia, amandla aso azoba yini? izinzuzo nezinkinga? isebenza kanjani, futhi izobiza malini?
AmaCanary Islands nama-Azores azobambisana ezindabeni ezivuselelekayo
ICanaries neAzores zisayina isivumelwano sokusebenzisana, sokucwaninga nentuthuko sokuvuselelwa. ICanarias izimisele ngokushintsha imodeli yayo yamandla
Izilwandle zinamandla amakhulu okukhiqiza amandla, njengamagagasi, amagagasi olwandle noma i-saline gradients. Sizokwazi yini ukuwasebenzisa?
Iyini intela yelanga? Sikutshela ukuthi kukuthinta kanjani wena, ukuthi kuzokubiza ini, isimo kwamanye amazwe ase-Europe nokuningi. Uyawazi lo mthetho?
IGalicia ingukuzibusa kwesi-3 ngamandla emandla avuselelekayo, kepha ama-31% womkhiqizo wayo wenziwa ngamalahle, acishe aphindwe kabili isilinganiso seSpain.
Yazi konke okubalulekile kwamandla we-geothermal kanye nezinhlelo zawo zokupholisa umoya, ukusetshenziswa, ukusatshalaliswa nekusasa layo.
Sikutshela konke mayelana neTesla Powerwall 2, isizukulwane sesibili sebhethri leTesla. Ihluke kanjani kumodeli yangaphambilini?
Amandla avuselelekayo akhuphuka ngama-20% eminyakeni emi-2 edlule eCanary Islands
Eminyakeni emi-2 eyedlule, amandla omoya afakwe eCanary Islands akhuphuke ngama-20%, futhi ngaphezu kwalokho azokwenyuka ngenxa ye-FDCAN, ezoxhasa ngemali amaphrojekthi amasha angama-90.
I-solar solar ibizwa ngeSolarCoin
ISolarCoin (SLR) iyi-cryptocurrency eyethulwe ngoJanuwari 2014, izama ukukhuthaza ukuthuthukiswa komhlaba wonke kwamandla elanga kusetshenziswa ubuchwepheshe beBlockchain
Ukuthola imali emotweni kagesi kushibhile izikhathi eziphindwe ka-5 kunephethiloli
Ukugcwalisa ibhethri lemoto kagesi ukuhamba amakhilomitha ayi-100 kungabiza kuze kufike ku-80% kunokuhamba ngemoto kaphethiloli
Ukungcoliswa komoya kuyinkinga yamanje eqala ukudala ukukhathazeka okuningi, njengoba abantu beya ngokuya bekwazi
Inkinga yokungcoliswa kolwandle
Siyindawo ephezulu yokuvakasha, kepha ukunakekela ukungcola esikukhiqiza emabhishi kubalulekile ukuqhubeka nokukujabulela minyaka yonke
Izici okufanele uzicabangele lapho utshala imali kumandla avuselelekayo
Bayanda abantu abatshala imali ekuthuthukiseni amandla avuselelekayo. Wenzani uma ufuna ukubheja ngamandla avuselelekayo?
Bathuthukisa ama-solar panel asebenza ngokuqina okuphansi
Ososayensi baseChina benze amaphaneli elanga akwazi ukukhiqiza ugesi ngezinsuku ezinamafu, ngemvula, inkungu noma nasebusuku.
Izitshalo ezi-5 ezinkulu zokuphehla ugesi emhlabeni
I-Hydropower ingumthombo wokuqala ovuselelekayo. Njengamanje amandla afakiwe adlula i-1.000 GW futhi ukukhiqizwa kwawo kufinyelela ku-1.437 TWh
Sizobona izinhlobo ezahlukene zama-light, izici zawo, ukusetshenziswa, intengo, ubude besikhathi ... ukubona ukuthi iyiphi inketho yezindlu zethu
IDamu i-Three Gorges yisona sitshalo esikhulu sokuphehla ugesi emhlabeni, sandiswe ngaphezu kwamakhilomitha amabili ububanzi ngamamitha ayizinkulungwane ezimbili ubude
Ekupheleni konyaka we-2017, iXunta de Galicia izobe isisekele ukufakwa kwama-boilers e-biomass angaphezu kwamakhulu amane (4.000 XNUMX) emakhaya.
Yimaphi amazwe angabakhiqizi abakhulu bamandla avuselelekayo?
Amazwe akhiqiza ugesi ovuseleleka kakhulu yiNorway neNew Zealand, akhiqiza u-97,9% no-84% kagesi wawo ngamandla aluhlaza.
Izitshalo eziyi-7 ezinkulu zikagesi eSpain
Izici zobuchwepheshe, indawo nendawo yezitshalo eziyi-7 ezinkulu zokuphehla ugesi ezweni, eziqhutshwa kakhulu yi-Iberdrola.
UMurcia uzoqala ukunikeza usizo lwezigidi ezintathu nengxenye zama-euro kukho konke ukonga, ukusebenza kahle kwamandla kanye namaphrojekthi wamandla avuselelekayo.
ISpain inamandla amakhulu kagesi, lokhu kuthuthukiswe iminyaka eyikhulu. Ngenxa yalokhu sinesistimu enkulu yokuphehla ugesi.
U-Iberdrola uthole zonke izimvume zokwakhiwa kwepulazi lomoya elisempumalanga i-East Anglia. Okuzoba namandla afinyelela ku-1.200 MW
Ukukhishwa kwegesi lokushisa kukhuphuka kakhulu ngenxa yesomiso
Ukuntuleka kwamanzi emaxhaphozini kudale ukukhishwa kwamagesi abamba ukushisa engxenyeni yokuqala yonyaka, lo mkhakha waxosha izigidi eziyi-17,2 ngaphezulu.
ISchiphol nezinye izikhumulo zezindiza ezintathu zaseDashi zizosebenza ezivuseleleni zodwa e3
Izikhumulo zezindiza zeqembu laseSchiphol (i-Amsterdam, i-Eindhoven, iRotterdam neLelystad) zizosebenza kuphela kumandla avuselelekayo kusuka ngomhlaka 1 Januwari.
ISpain inciphisa ukukhishwa kwayo kwegesi ngenxa yokuvuselelwa
ISpain ikhiphe amagesi amancane abamba ukushisa kunakwiminye iminyaka ngenxa yokusetshenziswa okuvuselelekayo.
ISpain ibuyela ukugembula ngamandla avuselelekayo
Ngemuva kweminyaka embalwa esabekayo kulo mkhakha, kubonakala sengathi bakubonile ukukhanya ngezindali ezi-3 zokugcina ezenziwa ukufeza izinhloso ze-EU.
Izigidi ezingama-228 zeCanary Islands Fdcan zizosetshenziswa kumaphrojekthi angavuselelwa angama-90
Ngenxa yeCanary Islands FDCAN, amanye amaphrojekthi we-90 wokuthuthukisa ukuphathwa kwamandla eziqhingini ezahlukahlukene azothola uxhaso lwama- € 228 wezigidi.
Ezinye izindlela zokusebenzisa imishini yendabuko yomoya
Ngosizo lwentuthuko yezobuchwepheshe kanye nemibono yobuhlakani, singajabulela ezinye izindlela ezahlukahlukene zemishini ejwayelekile yomoya.
IScotland ivula ipulazi lomoya elintantayo elingamakhilomitha angama-25 ukusuka ogwini
IScotland ivula ipulazi lomoya elintantayo elingamakhilomitha angama-25 ukusuka ogwini, noma okwamanje okwamanje kufakwe i-turbine eyodwa kanti kulindeleke ukuthi kufakwe ezinye ezi-4.
Izakhiwo zikamasipala eziyi-1000 zizozimela eBarcelona ngo-2018
Cishe amabhilidi ayi-1000 kamasipala kanye nokukhanyiswa komgwaqo kwedolobha kuzohlinzekwa ngumthengisi wamandla wesikhathi esizayo
INicaragua, kanye neCosta Rica neSweden, kanye neNicaragua, bangabaholi bezwe ekwenziweni nasekuqalisweni kukagesi ovuselelekayo.
Amandla avuselelekayo afinyelela ezokuthutha zomphakathi
Uhlelo lwezokuthutha zomphakathi seluqala ukwenza olwesimanje ngokwethula amandla avuselelekayo, yize imoto kagesi iyinjini enkulu yenqubekela phambili.
IPortugal ikwazi ukusebenza cishe isonto kuphela ngamandla avuselelekayo
Yonke iPortugal igijime izinsuku ezine ngokuvuselelwa. Kungokokuqala ukuthi izwe elithuthukile lisebenzise kuphela izinto ezivuselelekayo isikhathi eside kangaka.
Ngamandla elanga amaningi, intengo yokukhanya ibizoba ngu-36% eshibhile
Ukube iSpain ifake amandla afanayo e-photovoltaic anayo iJalimane, intengo kagesi ibingaba ngu-36% eshibhile.
AbakwaTesla bajoyina amabutho okusebenzisa amabhethri ngamandla omoya aphesheya kwezilwandle
I-Tesla ne-Deepwater Wind bajoyina amabutho ukudala ipulazi lomoya ukuze banikeze ugu lwe-Martha's Vineyard ngaphezu kokukwazi ukugcina amandla omoya
Izitimela zeHybrid ezinamaphaneli elanga ziqala ukugoqeka eNdiya
I-Indian Railways ithutha abantu abayizigidi ezingama-23 namathani ayizigidi ezingama-2,65 wezimpahla nsuku zonke. Lobo bukhulu bezinombolo budinga ushintsho lwemodeli
I-Iran ikhulisa ukuzibophezela kwayo emandleni avuselelekayo
I-Iran inamandla amakhulu okukhiqiza amandla avuselelekayo eMiddle East, njengomoya, i-geothermal, i-hydroelectric, i-solar kanye ne-thermal
IGoogle ifuna ukusebenzisa usawoti ukugcina amandla avuselelekayo
IGoogle ifuna ukugembula ekusebenziseni usawoti kanye ne-antifreeze ukuze sikwazi ukugcina amandla avuselelekayo esimosha.
Imvamisa, ukungcoliswa kwamanzi kwenzeka ngokukhishwa okuqondile noma okungaqondile emithonjeni yamanzi yezinto ezahlukahlukene ezingcolisayo.
Ukukhuphuka okukhulu kwezimoto zikagesi eChina
Kulezi zinsuku, kuthengiswa izimoto eziningi ezisebenza ngogesi eChina kunasemhlabeni wonke. Kukhona ukuqhuma kwangempela kuzo zonke izinhlobo zezimoto zikagesi.
Isimo samandla avuselelekayo eSpain kanye nemibono ye-2020
Okwamanje kunezinhloso ezintathu zamandla, okumele zibhekelwe imakethe yase-Europe ngonyaka we-2020 (lokho okubizwa nge- "triple 20")
Indali evuselelekayo izokhiqiza cishe imisebenzi engama-58.000 emisha
Ngenxa yendali yamandla avuselelekayo ebanjiwe, iSpain izothola amandla amasha asuselwa kumandla ahlanzekile.
Izimbangela nezinkinga zokungcola komoya
Thola izinkinga ezinkulu zempilo yakho yokungcola komoya nokuthi yini esingayenza sonke ukuyixazulula.
I-ACS iwine kakhulu endalini yokugcina evuselelekayo
I-ACS ingumnqobi wendali yamandla avuselelekayo. I-1550MW ye-photovoltaic inikezwe. UForestalia no-Enel nabo bathole ingxenye yabo yekhekhe
Imiphumela yendali yamandla avuselelekayo
Ekugcineni siyawazi umphumela wendali yamandla evuselelekayo. Ngabe ufuna ukwazi kabanzi ngemiphumela yale ndali?
Ukulindelwa okukhulu endalini yesithathu evuselelekayo
Indali igcina izindlela ezifanayo zesabelo esilawula ngoMeyi futhi eziphikiswa kanzima ngabagqugquzeli be-photovoltaic,
Izitshalo zelanga ezintantayo
Izitshalo zelanga ezintantayo seziqale ukukhula eminyakeni yamuva. Indlela esebenza ngayo iyefana naleyo yamapulazi omoya aphesheya kwezilwandle
Izinzuzo ezingakholeki zamandla we-geothermal!
Kungumthombo ongapheli wamandla izinsuku ezingama-365 ngonyaka, ngokungafani nezinye izinhlelo, izimo zezulu okwamanje azithinti.
Ukuvalwa komoya eCatalonia kuqhubeke iminyaka engaphezu kwemine
Ukuvalwa komoya sekuphele iminyaka engaphezu kwemine eCatalonia. NgoJanuwari 2013 kwavulwa ipaki yokugcina, kusukela lapho akukaze kuthunyelwe i-MW.
IFrance ivala iziphenduli zenuzi eziyi-17 ngo-2025
Ukuguqulwa kweMacron kuza kuyo yonke imikhakha yaseFrance. Uhulumeni umemezele ukuthi kungenzeka kuvalwe iziphenduli zenuzi eziyi-17 ngaphambi kuka-2025.
Ingxenye yesithathu yamandla asetshenzisiwe e-El Hierro ngoJuni yavuselelwa
I-El Hierro Hydroelectric Power Plant ihlinzeke ngo-62% kagesi wakulesi siqhingi ngoJuni, okuqhakambisa izikhathi lapho ifinyelele khona ku-100% wamandla.
Ngokokuqala ngqa, kutshalwa okuningi emkhakheni kagesi
Kungokokuqala ukuthi kube nemali eningi efakwe kugesi kunamafutha ezimbiwa phansi. Lokhu kusiza ekuguqulweni kwamandla.